« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing အတွက်ရော်ဘာ Coating
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည် »
61 မီးရထားကို Maintenance ဦးစီးဌာနMıntıka Ayranci နေဖြင့်ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပြီးလမ်းများ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ Eregli IST သက်တမ်းတိုးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အပိုဒ် 4734 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် 19 ပြီးစီးခဲ့သည်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 431975
ခ) Place: KONYA - KARAMAN, EREĞLİ AYRANCI နှင့်ခရိုင်
အဆိုပါပေးပို့တည်နေရာ (ကိုးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှ 90: ဃ) အချိန်လုပ်ဆောင်ပါ။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကမ္ဘာမြေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ, အနုပညာ structures များ, ပလက်ဖောင်းပေါ်နှင့်တံတားအလုပ်လုပ် guardrails ပြီးစီးအတူကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအောင်လိမ့်မည် 11 / 06 / 2014 SÝVASအခြားအထူး BUDGET ORGANIZATION အထွေထွေအဝေးပြေးလမ်းမကြီးReşadiye၏ညွှန်ကြားရေးမှူး (xnumxbölg HD) -Gölovလမ်းဆုံလမ်း (16 + 7-0 + 000 လက်ဝါးကပ်တိုင်ကီလိုမီတာ) ကိုမွကွေီးပျေါမှာအလုပ်လုပ်, အနုပညာ structures များ, Track အလုပ်လုပ်ထောက်ပံ့ရေးဆောက်လုပ်ရေးလိမ့်မည် Guardrails နှင့်တံတားYaptırılacaktırဒေသန္တရရုံး-47.BÖLG guardrails နှင့်ပြီးစီးအတူတံတား၏မြေကြီးတပြင် Works, အနုပညာ structures များ, ပလက်ဖောင်းပေါ်အလုပ်လုပ် (BSK) yapılmasıişဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 000 4734 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2014 58393-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kümbet mAh ။ Muhsin Yazicioglu Boulevard အမှတ် 1 39 Sivas / Sivas ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စပ်, ဆောက်လုပ်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်, Superstructure အလုပ်လုပ် built ပါလိမ့်မည် 02 / 04 / 2014 14 + 0-000 ကမ္ဘာမြေ Works, အနုပညာ structures များ, ထိပ်တန်းအကြား + 19: ကမ္ဘာမြေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ, အနုပညာ structures များ, Superstructure အလုပ်လုပ်ဒေသန္တရရုံး-309.BÖLG BURSA အခြားအထူး BUDGET ORGANIZATION အထွေထွေ (Lapsike-Big) လမ်းဆုံ Karabiga ပြည်နယ်အဝေးပြေးမိုင်အကွာအဝေး၏အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကောက်ယူပါလိမ့်မည် ဆောက်လုပ်ရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 31291 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: 152 ရပျကှကျ House ။ တူရကီ YOLU CAD ။ အမှတ် 286 16330 Duaçınarı YILDIRIM / BURSA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2243607000 - 2243607024 ဂ) e-mail လိပ်စာ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စပ်, ဆောက်လုပ်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း, အထွေထွေအလုပ်လုပ် Track အလုပ်လုပ် built ပါလိမ့်မည် 07 / 08 / 2014 Eskişehir - - Bozüyükလမ်း, Eskisehir - Kütahyaလမ်းနှင့် Eskisehir - အမျိုးမျိုးသောဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်Sarıcakaya Way ကိုစပ်, ဆောက်လုပ်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်, မြေကြီးအလုပ်လုပ်ပုံ, အနုပညာ structures များ, ပလက်ဖောင်းပေါ်အလုပ်လုပ်နှင့်အထွေထွေအလုပ်လုပ်ဒေသန္တရရုံး-4.BÖLGတူရကီအခြားအထူး BUDGET ORGANIZATION အထွေထွေအဝေးပြေးလမ်းမကြီး Sivrihisar ဒါရိုက်တာကောက်ယူပါလိမ့်မည် အများအပြားကကာယဗလနှင့်ဖျော်ဖြေဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အမှတ် 4734 19 ပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်အလုပ်လုပ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 83566 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: အသားစားကြက်မွေးမြူရေး CAD ။ အမှတ် 39 06110 DIŞKAPIALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းများနှင့် ...
ဘေးလ်-İvrindiပြည်နယ်အဝေးပြေးပျောက်ဆုံးကမ္ဘာမြေ Works, အနုပညာ structures များ, တံတားလုပ်ငန်းများနဲ့ Track အလုပ်လုပ်ယောဘသည်ကျန်ရှိသော 26 / 04 / 2014 စပ်, structure, တံတား BRIDGE အလုပ်ပလက်ဖောင်းပေါ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘေးလ်-İvrindiပြည်နယ်အဝေးပြေးမိုင်အကွာအဝေး၏ဝယ်ယူရေးအသိပေးစာဒေသန္တရရုံး-14.BÖLG BURSA အခြားအထူး BUDGET ORGANIZATION အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအလုပ်လုပ်: 132 + 100-151 + 355 လက်ဝါးကပ်တိုင်ကျန်ရှိသောကမ္ဘာမြေအလုပ်လုပ်ပျောက်ဆုံးနေ, အနုပညာ structures များ, Bridges အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့် Track စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 41965 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: 152 ရပျကှကျ House ။ တူရကီ YOLU CAD ။ အမှတ် 286 16330 Duaçınarı YILDIRIM / BURSA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2243607000 - 2243607024 က c) ...
လက်ဝါးကပ်တိုင်လမ်းများကမ္ဘာမြေ Works, အနုပညာ structures များနှင့် Superstructure အလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır 09 / 04 / 2013 FATSA-AYBASTI လမ်း KM:0+ 000-14 + 400 AND KM: 22 + 000-49 + 300 စပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာနှင့် superstructure အကြားဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေး၏ 2013 / 42982; က) လိပ်စာ: Esenevler ခရိုင်Atatürk Boulevard အဘယ်သူမျှမ: 380 55200 ATAKUM / SAMSUN ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3624374780 - 3624372912 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: bolxnumx@kgm.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာကဒီမှာမြင်နိုင်ပါသည်: https: // နု ekap.kik.gov.tr/ekap/; ဃ) Place: အဝေးပြေး 07 ။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုတင်ဒါခန်းမ Esenevler Mah ။ Ataturk Bulv ။ အမှတ်7380 Atakum / Samsun င) ...
မီးရထားအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır, TCDD, TCDD6။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Erzurum Palandökenထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကအဆင့် II ကိုမီးရထား Link ကိုနှင့်အလုပ်၏ဆောက်လုပ်ရေးပြုမိပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးရထားအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır (TÜLOMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Adana-Mersin မီးရထားလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Metro အစ္စတန်ဘူလ် M1 နှင့် M3 Yaptırılacaktırအတွက်မီးရထားလိုင်းပြုပြင်ခြင်းအလုပ်လုပ်